Xisbiga Kulmiye Ma Ruxmo Qalinkii Kaysar Maxamed
Saturday October 06, 2018 - 10:26:31 in Maqaallo by saleban Cilmi
1. Marka hore waxaa Muhiim ah in Qof kasta oo Somaliland u dhashay uu ogaado in Dastuurka Dalka Somaliland ka soo hor jeedo Xeer kasta oo ka hor imanaya Shareecada Islaamka sidaas daraadeedna ay Xukuumada iyo Xisbiyada Mucaaridka ah iyo Culimadeena Sharafta badani ay isku raaceen in laga saaro xeerkaas qodob kasta oo ka hor imanaya Diinteena Sharafta badan. Waxaana imika socda oo gacanta lagu hayaa sidii Sharci ahaan dib loogu sixi lahaa Ilduufka dhacay. Shacbi iyo Xukuumad iyo Xisbiyo waxa ay Ummada reer Somaliland ka middaysan yihiin in Xeerkaas la saxo, gacanta ayaana lagu hayaa iyada oo Mucaarid iyo Muxaafidba la isku duuban yahay.
2. Garyaqaan Jaamac Shabeel waa Geesi kaalin weyn ka soo qaatay halgankii ururkii SNM, sidoo kale waxa uu dhiig iyo dheecaanba u shubay oo uu wakhtigiisa iyo Naftiisa u huray sidii uu Xisbiga Kulmiye mar labaad u guulaysan lahaa, waana mid aan cidina dafiri karin kaalinta uu ku leeyahay Xisbiga. Jaamac oo aan ku ogahay Hal-adayg aan gebi-dhaclayn oo had iyo goor mabaadi’da uu qaato ku adag, hadana waxaan Kalsooni buuxda ku qabaa inuu yahay Halyeey Waayo arag ah oo u Dulqaadan kara xataa hadii uu khalad tirsanayo ama lagu khaldamo. Waxaan Kalsooni weyn ku qabaa inuu yahay Masuul Tudhaale leh oo Markasta Danta Guud iyo Danta Xisbiga wax kasta ka horreysiin kara soona afjari kara buuqa jira, si weyn ayaanan uga soo horjeedaa cid kasta oo dhaawacaysa Sharafta uu Jaamac ku leeyahay Xisbiga Kulmiye iyo Qaranka. Waxaa sidoo kale aan Jaamac usoo jeedinayaa in wixii tabashooyin ah aanuu Warbaahinta la tegin ee uu sI toos ah ugu gudbiyo Xukuumadiisa iyo Xisbigiisa.
3. Xisbiga Kulmiye waa Xisbi Waayo arag ah oo ay ka buuxaan Geesiyaal Saciimo ah oo Awwood u leh inay soo afjaraan oo ay xalliyaan Khilaaf kasta oo abuurma. Waxaanan Kalsooni buuxda ku qabaa in si dhakhso ah loo xallin doono arrintan taagan.
Ugu danbayn Waxaan Dadweynaha reer Somaliland Xasuusinayaa in Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu yahay Shakhsi ku adag Diintiisa iyo Dhaqankeena suuban oo aan marnaba looga shakiyi karin inuu fuliyo qawaaniin Shareecada iyo Dastuurkeena ka hor imanaya.
Xeerkan sida Ilduufka ah inoo hoos marayna Xukuumadu waxay go’aansatay in la saxo oo laga saaro qodobada Shareecada ka hor imanaya taasoo Xisbiyada Mucaaridka ah, Culimadeena iyo Wasaarada Diinta iyo Awqaaftu ay isla eegayaan.
Somaliland ha Guulaysto